Adobe dia mamoaka horonantsary mampiseho ny fifantenana ireo zavatra vaovao | Famoronana an-tserasera
Tsy ho ela ianao dia afaka misafidy zavatra tsirairay miaraka amin'ilay fitaovana vaovao ao amin'ny Adobe Photoshop
Manuel Ramirez | | Photoshop, maro
Adobe dia nanambara fisehoan-javatra lehibe noho ny zava-dehibe ho an'ny fiainana andavanandron'ny mpamorona iray izay tsy maintsy mamorona sehatra. Fitaovana vaovao Safidy ho an'ny famaritana tena manokana. Izany hoe, azonao atao ny misafidy zavatra iray manontolo hanadinoana ny fampiasana ny tadivavarana andriamby sy ireo fitaovana ampiasana antsika.
Ao amin'ny horonan-tsary YouTube zarainay avy amin'ireto andalana ireto ihany, Adobe mampiseho ny fomba fiasan'ity fitaovana ity izay hahafahantsika mitahiry fotoana sarobidy izay azontsika ampiasaina amin'ny tanjona hafa.
Raha efa manana ny bokotra «Select Theme» isika, ary ahafahan'ny mpampiasa misafidy ny lohahevitra malaza indrindra amin'ny sary iray noho ny tsindry tsotra sy tokana, dia ho afaka hampiasa tsy ho ela ianaor ilay fitaovana fifantenana zavatra vaovao avy amin'ny Adobe Photoshop.
Ity fitaovana ity dia ho hita eo an-tampon'ny vondrona fitaovana Magic Wand ary hamela antsika mifantina zavatra tsirairay ary koa manambatra na esory izy ireo rehefa irintsika izany. Ny fomba "misambotra" an'io fitaovana vaovao io dia noho ny fanampiana sarobidin'ny Adobe Sensei, ny haitao momba ny Artificielle artificielle an'i Adobe izay ampiasainy amin'ny ankamaroan'ny vokatra.
mitovy Mpitantana vokatra Photoshop, Payne Stotzner, ao amin'ny horonantsary navoaka androany tao amin'ny YouTube, dia mampiseho amintsika topy maso ny fomba fiasan'ity fitaovana ity. Koa mamporisika anao izahay hankafizanao ny 1:50 segondra maharitra ny horonan-tsary ary asehony aminay ny fomba ahafahan'ny fitaovana vaovao mandray zavatra iray manontolo. Izy io dia manao azy miaraka amin'ny sarin-jazavavy roa izay, amin'ny fisafidianana ny boaty fifantenana dia manao ny azy i Adobe Sensei hisafidianana azy roa.
Vaovao fitaovana hanamora ny zavatra rehefa tsy maintsy misafidy zavatra samihafa ao amin'ilay sehatra isika hampihatra ny vokany sy ny hetsika hafa avelan'ny programa toa antsika Adobe. Adobe izay manana efa manomana Adobe Fresco ary tsy ho ela dia hahazo ny fampidirana isika miaraka amin'ny fitaovana famokarana toa ny Microsoft Word.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Tsy ho ela ianao dia afaka misafidy zavatra tsirairay miaraka amin'ilay fitaovana vaovao ao amin'ny Adobe Photoshop
Adobe dia nanambara ny fampidirana mivantana ao amin'ny Microsoft Word sy PowerPoint